Semalt: सब भन्दा साधारण ब्रान्ड गल्तीहरू के हुन् र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने
धेरै कम्पनीहरू विश्वास गर्छन् कि ई-वाणिज्य एक द्रुत गति गतिको उद्योग हो जहाँ तपाईले नयापन गर्नु पर्छ वा मर्नु पर्छ, यद्यपि त्यहाँ धेरै सफल ब्रान्डहरु छन् कि अनलाइन बिक्री उनीहरुकै समान बेच्छन्। s ० को दशकदेखि व्यवसाय गर्दै आइरहेको छ। सामान्यतया, समस्या उनीहरूले गर्ने दृष्टिकोणको आधारभूतमा पर्दछ जब यो अनलाइन रिटेलि toको कुरा आउँदछ।
वास्तवमा, धेरैले सर्भर मानसिकता प्रयोग गरेर डिजिटल उपस्थिति स्थापना गरेका छन्। तिनीहरू केवल वेबसाइटमा निर्भर छन् र ग्राहकहरूलाई उत्पादनहरू पुर्‍याउने एक मात्र तरीकाको रूपमा यो देख्छन्। यो दृष्टिकोण प्रयोग गर्नुको सट्टा, ई-वाणिज्य विक्रेता वा वर्काहोलिकको रूपमा देख्नुपर्दछ जुन नयाँ ग्राहकहरूको खोजी गर्दा हालका उपभोक्ताहरूको मूल्य बढाउँदछ।
त्यसोभए तपाइँ कसरी जान्नुहुन्छ कि यदि तपाइँको डिजिटल उपस्थिति वर्काहोलिक वा सर्भर हो? अलेक्ज्याण्डर पेरेसुन्को, विशेषज्ञ Semalt ले तपाइँले के विचार गर्नु पर्छ भनेर वर्णन गर्दछ जब तपाइँको स्ट्र्याट © gie numГ ©ica पूरा गर्नुहोस्।
१. तपाईको साइट बिक्री भइरहेको छैन
अनलाइन बिक्रीको साथ, त्यहाँ कुनै शोरूम छैन, कुनै क्याटलग छैन र तपाईंको साइट पूरा गर्न स्टाफ छैन। नतिजाको रूपमा, अवस्थित ग्राहकहरूलाई बेच्ने वेबसाइटको लागि यो पर्याप्त छैन। तपाईंको फिंगरप्रिन्टलाई अर्को तहमा लैजान, ई-वाणिज्य साइटले उत्पादहरू खरीद गर्नका लागि नयाँ सम्भावितहरूलाई विश्वास दिलाउँदछ।
सुरू गर्नका लागि, तपाईंको उत्पाद विवरण पृष्ठहरूले ग्राहकलाई उत्पादन खरीद गर्न मनाउनु आवश्यक छ। यदि यी पृष्ठहरू उत्पादन बेच्न असफल भए, ग्राहक केवल साइटमा फिर्ता लिन्छ। पृष्ठको बारेमा, गृह पृष्ठ र तपाईंको नीति पृष्ठले पनि नयाँ प्रयोगकर्तामा विश्वास जगाउँदछ। यो गर्नका लागि तपाईसँग कन्फिन्सिंग प्रतिलिपि हुनुपर्दछ, ग्राहक समीक्षाको लागि एक ठाउँ, पेशेवर फोटोग्राफी, र अपडेट गरिएको शिपिंग / रिटर्न नीति।
२. तपाईको डिजिटल मार्केटिंगले अधिक मेहनत लिन्छ
कम्पनीहरूले सामना गर्ने सबैभन्दा सामान्य चुनौती मध्ये एक हो कि तिनीहरूसँग मुटुमा डिजिटल मार्केटिंग छैन। जबकि तिनीहरूसँग सीधा क्लाइन्ट वेबसाइट छ किनकि यो फेसनबल छ, यी प्राय जसो कम्पनीहरू ईंट र मोर्टार प्रविधिहरूमा समर्पित छन्।
Your. तपाईका अफरहरु पर्याप्त छैनन्
यदि तपाइँ नयाँ व्यवसायहरू प्राप्त गर्न सफल हुन चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ आक्रामक पदोन्नतिहरूमा संलग्न हुन आवश्यक छ जुन सम्भावनाहरूले कतै इन्कार गर्न सक्दछ। राम्रो सम्झौता दिएर, तपाईं आफ्नो विपणन प्रयासको बाँकी सुविधा।
You. तपाईं फलो-अपलाई महत्त्व दिनुहुन्न
खानाको अन्त्यमा, एक सामान्य वेटरले तपाईंलाई "म आशा गर्दछु तपाईं फर्केर आउनुहुनेछ!" भन्नेछ, तथापि, एक राम्रो विक्रेता अतिरिक्त माईलमा जान्छ र टी-नम्बर सहित विवरणहरू प्राप्त गर्दछ। टेलिफोन र, हालका वर्षहरूमा ग्राहकहरूको ईमेल ठेगानाहरू। किन? ग्राहकलाई पछ्याउने एकमात्र उद्देश्यको लागि।
सफल ब्रान्डहरू जान्दछन् कि तिनीहरूले आफ्नो साइटको लागि एक नयाँ नयाँ सम्भावनाहरू ड्राइभ गर्दा पनि, तिनीहरू धेरै थोरै आगन्तुकहरूबाट अर्डरहरू प्राप्त गर्दछन्। औसतमा, रूपान्तरण दरहरू २-%% हुन्। गोप्य भनेको बाँकी%%% आगन्तुकहरूलाई फर्काउन राजी गर्नु हो।
यदि तपाईंको टोलीले यो सर्वरको सट्टा विक्रेता बनाउनमा विश्वास गर्दछ भने, तपाईंले डिजिटल लिगमा खेल्नु पर्छ। तपाईं यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ?
भुक्तान गरिएको खोजी
ब्रान्डहरू जस्ता सर्भरहरूले अवस्थित ग्राहकहरूको सुरक्षाको लागि सशुल्क खोजी प्रयोग गर्दछ। जे होस् तिनीहरू अनब्रेन्डेड किनमेल वा अभियानमा संलग्न छन्, तिनीहरूको रोटीको रोटी र माखन ब्राण्ड किवर्डमा निर्मित एउटा अभियान हो। किनकि तिनीहरूको ब्रान्डको भोल्यूम उनीहरूको हातको अधिकांश भागको लागि हुन्छ, उनीहरूले अवस्थित भोल्युमलाई प्रभावकारी र प्रभावकारी रूपमा पूंजी दिन्छन्।
ब्रान्डहरू, जसले एक विक्रेता जस्तै कार्य गर्दछ, उनीहरूको साइटलाई विक्रेता जस्तो व्यवहार गर्दछ जसले भुक्तान गरिएको खोजलाई नयाँ व्यवसाय पाउने प्राथमिक माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दछ। तिनीहरूले यसलाई सम्भावित ग्राहकहरुलाई भुक्तान गर्ने ग्राहकहरुमा रूपान्तरण गर्न प्रयोग गर्छन्। प्रक्रियामा, तिनीहरूले नकारात्मक लक्षित कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोग गरेर अनावश्यक विज्ञापनहरू कम गर्छन्। यी कम्पनीहरूले आवश्यक अभियानको साथ आफ्नो ब्रान्डको सुरक्षा गर्दछ, तर उनीहरूको अधिकांश बजेट गैर-व्यावसायिक कुञ्जी शब्दहरू र नयाँ गतिविधिहरू प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अभियानहरू खरीद गर्न जान्छ।
तुलना - शपिंग ईन्जिनहरू
सर्भर-प्रकारका व्यवसायहरू तुलना ईन्जिनसँग राख्न असमर्थ छन्। सामान्यतया यो च्यानल व्यवस्थापन संगै केहि गर्न को लागी गरीन्छ। बरु, यो अन्य अनलाइन व्यापारीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न संगठनको अनिच्छुकताको संकेत हो। यी ब्रान्डहरू उच्च मूल्य, प्रभावहीन उत्पाद विवरण पृष्ठहरू, उच्च शिपिंग लागत, र प्रतिकूल प्रतिक्रियात्मक नीतिहरूको शिकार भएका छन्।
"सेल्सपर्सन" ब्रान्ड धेरै प्रतिस्पर्धी छ र नेक्स्टग, ईबे शपिंग नेटवर्क र गुगल शपिंग जस्ता धेरै तुलना ईन्जिनहरूलाई समर्थन गर्न सक्छ। कम्पनीहरूले यी ईन्जिनहरूलाई समर्थन गर्न सक्ने एक मात्र तरिका हो जब उनीहरूसँग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उत्पादनहरू हुन्छन्, तिनीहरूको मार्केटि team टोली आक्रामक रूपमा नयाँ उपभोक्ताहरूको खोजी गर्दैछ र उनीहरूको साइटले प्रभावकारी रूपमा लोकप्रिय उत्पादनहरू बिक्री गरिरहेको छ।
सर्भर-प्रकारका व्यवसायहरूले एसईओ ट्राफिकलाई प्रभावकारी रूपमा निगरानी गर्न आवश्यक छ। यस दृष्टिकोणको साथ केवल समस्या यो छ कि तपाईं ट्राफिक बढाउन शक्तिहीन हुनुहुनेछ। किन? किनभने तपाईंको हालको ट्राफिक ब्राण्ड सर्तहरू प्रयोग गरेर तपाईंको साइटमा आउँदैछ। तपाईं एक सर्भर हुनुहुन्छ कि भनेर पत्ता लगाउन, प्राकृतिक खोजीको लागि अवतरण पृष्ठ रिपोर्ट जाँच गर्नुहोस्। तपाईं यो देखेर छक्क पर्नुहुनेछ कि धेरै जसो प्रयोगकर्ताहरू मुख्यतया तपाईंको गृह पृष्ठमा अवतरण गर्दछन्, तर भित्र पृष्ठहरूमा त्यहाँ एकदम थोरै गतिविधि छ।
В "विक्रेता" वेबसाईटले एसईओ को उपयोग गरी नयाँ सम्भावितहरु पाउन को लागी चिन्ह लगाईएको कुञ्जी को उपयोग गरेर नयाँ व्यवसाय चलाउन ध्यान केन्द्रित गर्दछ। तिनीहरूको ब्रान्ड सर्तहरू ताल्चा लगाइएको छ र अनुकूलित छ, तर तिनीहरूले मुख्य खोजी सर्तहरू प्रयोग गरेर नयाँ यातायात चलाउनमा केन्द्रित बढी समय खर्च गर्दछन्। यो गतिविधि धेरै जसो उत्पादन र कोटी पृष्ठहरूमा सर्भर गृह पृष्ठको विपरित हुन्छ।
"वेटर" ब्रान्डको मिडिया गतिविधि खुला छलफल बैठकसँग मिल्दोजुल्दो छ। यद्यपि प्लेटफर्ममा केही ग्राहकहरु गुनासो गरिरहेका छन्, सोशल मिडिया खाताको प्रबन्धको जिम्मामा व्यक्ति प्रायः आफैंसँग कुरा गरिरहेको छ।
व्यावसायिक दृष्टिकोणले उपभोक्ताहरूसँगको अन्तरक्रिया सुधार गर्न, ब्रान्डसँग जोडिएको आकर्षक वातावरण सिर्जना गर्न र ट्राफिक उत्पन्न गर्न मञ्चको समर्थन प्रयोग गर्दछ, जुन वृद्धिमा डोर्‍याउँछ। बिक्री
साधारणतया, यदि तपाइँ डिजिटल मार्केटिंग च्यानलहरू ग्राहक अधिग्रहण च्यानलहरूको रूपमा प्रयोग गर्ने चाहाना राख्नुहुन्छ भने, तपाइँले सहि मेट्रिक्समा हेर्नु पर्छ। सुरू गर्नका लागि, प्रत्येक च्यानलको साथ कति खरीद गरिरहनु भएको छ पत्ता लगाउनुहोस्। एकचोटि तपाईंले आफ्नो प्राथमिक प्रदर्शन सूचक पहिचान गर्नुभयो, तपाईं प्रत्येक च्यानलसँग टिंकिering सुरु गर्न सक्नुहुनेछ।
अन्तमा, धेरै ब्रान्डले डिजिटल मार्केटिंग को सबै भन्दा साधारण मार्ग को रूप मा प्रत्यक्ष-देखि उपभोक्ता बिक्री साइटहरु को उपयोग गर्न जारी राख्नेछ। जे होस्, कुनै पनि ब्रान्ड जसले काँचको छत तोड्न चाहान्छ नयाँ ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्न यसको अनलाइन उपस्थिति बुझ्नु पर्छ।